Isitshudeni esenza unyaka wesithathu e-UKZN, uMnu Sibonelo Mhlongo, silekelela unina ukwenza izifonyo ezingama-15 000 ngesaphulelo ukwenzela abantu base-UKZN.
Umfundi Uhlelele Abantu base-UKZN Izifonyo
Izifonyo ezinemibala yase-UKZN yilokho kanye okuhlelwa umfundi osemusha ekuhlelela abantu baseNyuvesi.
Lo mfundi, uMnu Sibonelo Mhlongo ofunda e-School of Mathematics, Statistics and Computer Science, usebenzisana nenkampani encane kanina yasemaphandleni KwaZulu-Natali ekhiqiza izingubo zokugqoka, ukwenza izifonyo zendwangu ezicela kuma-15 000 ngesaphulelo kubasebenzi nabafundi ngaphambi kokuthi babuyele emagcekeni esikhungweni.
UMhlongo, oyisitshudeni esenza unyaka wesithathu kwi-Applied Mathematics and Statistics, udabuka eMtubatuba lapho unina, uNks Tholakele Ncube, eneminyaka emithathu ephethe inkampani yakhe iSojikile.
Ngamaholidi uMhlongo ulekelela abasebenzi benkampani abayisithupha abenza ama-oda ezimpahla. Seloku kuqubuke ubhubhane i-COVID-19 nomgonqo ohambisana nalo, uMhlongo uthi ibhizinisi likanina lishayekile ngakuma-oda ezimpahla zikanokusho anjengezingubo zomshado nemiswenko yesonto njengoba enciphile.
Ngemuva kokuthi usihlalo we-Universities South Africa, uSolwazi Sibongile Muthwa ememezele ukuthi cishe izitshudeni zasemanyuvesi kuzodingeka zibe semagcekeni amanyuvesi ukuze kwenziwe izifundo ezidinga ukubonana ngamehlo, ukubhala izivivinyo kanye nokuqeqeshelwa umsebenzi kwenye inkathi, uMhlongo wabe esecabanga indlela angenza ngayo ukuvikela abantu baseNyuvesi kulo mbulalazwe wesifo.
Ngenkathi i-UKZN ikhipha inselelo kubafundi ukuthi ziqhamuke namasu azokwenza ukuthi kuphinde kufundiseke futhi kufundwe, uMhlongo nabakubo bacabange ukwenza izifonyo ezinemibala yase-UKZN njengoba inkampani kade yayenza izinto zokunqwaza nezabasebenzi abenza imisebenzi emqoka.
‘Nami ngiyilungu lomndeni wase-UKZN, ngakho bengifuna ukusiza ngalezi zikhathi ezinzima, ezingaqondakali,’ kusho uMhlongo, ofisa ukuqeda iziqu zakhe ngale sigatshana sonyaka wokufunda.
‘Bekunzima kubazali bami ukungifundisa, yingakho bengifisa ukwenza into engasiza wonke umuntu ngisho nokwenza izifonyo ezisezingeni, eziwashekayo ziphinde zisebenziseke,’ kusho yena.
Ngokulinganisa ukuthi kungenzeka iNyuvesi ivule ngasekupheleni kwale nyanga, uMhlongo wabona ukuthi inkampani eyenza izifonyo ezingaphezu kwama-3 500 ingakwazi ukuqasha abanye abantu ukuthi benze izifonyo ze-polyester ngezinsuku ezimbalwa.
Kuyimanje umsebenzi uqhubeka ngezinga eliphezulu!
Amagama: ngu-Christine Cuenod
I-UKZN Ibambisane Nesikhungo Ekukhuphuleni Izinga Lokuhlolela I-COVID-19 eKZN
Ifilimu Yopopayi Yabafundi Bezobuciko Izodlala Kwifestiveli Yaphesheya
I-COVID-19 Ifakelwe Izibuko Ebhukwini Elisha LaseSikoleni sezeMfundo